ပက်ပက်စက်စက်အလှူခံနေပါတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Drama, Essays.. » ပက်ပက်စက်စက်အလှူခံနေပါတယ်	30
Posted by Wow on May 31, 2016 in Drama, Essays.. | 30 comments
ကြောင်	: မောင်းဝတ်
Wow	: မောင်ကြွတ်
ကြောင်	: နင်ဘုလအင်ထဲ
Wow	: နိဟာနိဘာထင်ထင်
ကြောင်	: အလဂေါင်ကား
Wow	: သွသူတော့ဈေးရမှာပါအေ ကြောင်	: အုဖြုတ်ယောင်းတောင် ၀ယ်မယ့်သူမချိ
Wow	: နိမှာက ဖြုတ်ရောင်းစယာကို မရှိတာမလား
ကြောင်	: နီကုသိုလ် မလိုခြင်တကား
Wow	: တေပါ့လား
ကြောင်	: အကောင်းပေါမို့ သေခြာနောင်ထား
ဆရာမ ချစ်မြတ်နိုး မှော်ဘီမှာ ဓမာရုံဆောက်မလို့
Wow	: လှူချင်တယ်လေ ဘူသူအူးဆောင်မှာလဲ
ကြောင်	: နီပို့စ်တင်ရေ
နီနဲ့ ၀ီဂါမွတ်မ နှစ်ယောက်ပို့စ်တင်လိုက် တပတ်စီခြားပီး
ဘဏ်အကောင့်က ထုံးစံအတိုင်း လုပ်၊ ရွာထဲမှာရှိတာပဲ
Wow	: အင်း ပီးရော ချွိနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတင်လိုက်မယ်
ကြောင်	: သိန်းတရာကျော်လိုတာ .. ၅၀ တားဂက်ထားလုပ်ရင် ကောင်းမယ်
Wow	: အင်း
ကြောင်	: မအင်းနဲ့ သေခြာလုပ်
ပီးတော့ လူခံ လိုအူးမှာပဲ
Wow	: တိုင်ပင်လိုက်အူးမယ်ဆို အလှူခံတာမိုး မလုပ်ချင်ဘူး
ကြောင်	: နင်အခုတေ ဘိုလှုပ်မဲ
Wow	: တေရင်အလှူမခံရတော့ဘူးပေါ့
ကြောင်	: ငရဲဟဲ့
Wow : အံ့ပါ့တော် အလှူခံတိုင်းနတ်ပြီရောက်ရင် နတ်ပြည်မှာ ဂေါပကတွေချည်းနေမှာ
ကြောင်	: နင့်အတွက် ငါပြောထားတယ် မုမရဲ့ မြန်မြန်လုပ် သူများအူးသွားမဲ
Wow	: နိက နတ်ပြီပွဲစားမို့လား ပြောထားရအောင်
ကြောင်	: ငါနဲ့ပိုင်တယ်
Wow : အေးပါအေ နေအူး ရုံးရောက်မှ အခုရုံးသွားဖို့ပြင်ရအူးမယ်
အထက်ပါစကားများကတော့ ကြောင်ရီးနဲ့ ဒီနေ့မနက်စောစော ပီယ၀ါစာပြောဖြစ်ခဲ့တာပါ.. ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ကျနော်က အလှူခံတာဝါသနာမပါပါဘူး။ ဟိုတစ်လောကတင် ဘုရားသိန်းချီလှူပြီး ကိုယ့်ဝန်ထမ်းကျ လခတိုးမပေးချင်တဲ့ ဘောစိကို ရေးထားတဲ့ facebook ပို့စ်မှာ ၀င် အတင်းတုတ်ခဲ့သေးတယ် .. ကြောင်ရီး လူရွေးမှားပြီ .. နာ့ အလှူခံပို့စ်က ရိုက်ပေါက်.. ရိုက်မယ်ဆိုရင် ကြောင်ရီးကို ရိုက်ကြဘာာာ .. အနော်က နတ်ပြည်မှာ မြေကွက်လေးရမယ် ဆိုလို့လုပ်ရတာဘာာာ
နောက် ခုလို နိုင်ငံတော်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလမှာ ပြည်သူတွေကို ပညာရေး၊ ကျမ်းမာရေး၊ စားဝတ်နေရေး အထောက် အကူပြုတဲ့ အလှူမျိုးပဲ ပေးချင်ပါတယ်…
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ အဒေါ်တွေနေတဲ့ တံတားဖြူ-ကံလမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်ထဲက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ ခွေးတောင် စားမကုန်လို့ အလဟသ ဖြစ်နေတဲ့ ထမင်းဟင်းတွေ ပုတ်သိုးနေတာ တွေ့နေရလို့ပါ…
အဲ့လမ်းထဲက ခွေးတွေဆိုရင်လဲ တော်ရုံအစာသွားမကျွေးနဲ့ လှည့်တောင်မကျိဘူး..
ဒဂျီးဆိုဒ် ဖတ်ပါများပြီး နဲနဲ ဘယ်သန်သွားတာလည်း ဖြစ်လောက်တယ်… ဒါပေမဲ့ second thought ပေါ့နော်.. တနည်းပြန်စဉ်းစားမိတာက…
အလဟသဖြစ်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေရှိသလို ခုန ကြောင်ရီးပြောတဲ့ ဆရာမ ချစ်မြတ်နိုးက သဘာဝဓမ တရားရိပ်သာ မှာ တရားပြလေ့ရှိပါတယ်.. သဘာဝဓမလို ကျောင်းမျိုးကြတော့ တကယ့်ခိုကိုးရာမဲ့သူတွေကို စောင့်ရှောက်ထားတာပါ… ကျနော်တို့ ဂေဇက်အုပ်စု စုပြီးကျောင်းဆောင်တစ်ခုလှူဒါန်းရေစက်ချပွဲ ရောက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်..
အသက်ကြီးတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့ ဒုက္ခက အတော်ကြီးပါတယ်.. ကျနော်တို့ လက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်…
ကြီးမှဒုက္ခရောက်မှာ ငါက ငယ်သေးတယ် လို့လဲ တွေးလို့မရပါဘူး….
ငယ်တဲ့သူတွေလဲ အချိန်မရွေး အိုနာကျိုးကန်း ဖြစ်သွားနိုင်သလို.. ဘာမှ မဖြစ်တောင်မှ တချိန်မဟုတ် တချိန် ပလတ်ကျွတ် တတ်ပါတယ်… ဒီလိုပဲ ချော့တလှည့် ချောက်တခါနဲ့ အလှူခံရတာပဲ….. ဆိုတော့ ကျနော့်ကိုယ်တွေ့ တစ်နှစ်သင်္ကြန်မှာ တော်တော်လဲစိတ်ညစ်နေတာနဲ့ ယောဂီဆရာတစ်ယောက် လမ်းညွှန်မှုနဲ့ ထောက်ကြံ့မှာ တရားစခန်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်..
၀ိပသနာကို သဲအင်းနည်းနဲ့ ကျင့်ဖြစ်ပြီး ပလတ်ကျွတ်ချင်နေတဲ့ စိတ်တွေ တော်တော်ငြိမ်းချမ်းသွားတာပါ…
ဓမ္မာရုံဆိုတာမျိုးက ဒုက္ခရောက်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ပလတ်ကျွတ်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ငြိမ်းချမ်းရာရှာသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နည်းနည်းနဲ့ ရောက်လာကြသူတွေကို လက်ခံထားတရားပြ ကျွေးမွေးထားတဲ့နေရာပါ…
ဆိုတော့ လှူကောင်းပါတယ်… ကိုယ်လဲ ဘယ်အချိန် ထပ် ပလတ်ကျွတ်မယ်မှန်းမသိဘူးလေ ကဲပြော… ဘူသူစလှူမဒုံးးးးးးး အလှူငွေစာရင်း
၁။ မယ်ချွိ ၁၀၀,၀၀၀
၂။ မယ်ဝါး ၁၀၀,၀၀၀
၃။ ဝေ ၁၀၀,၀၀၀
၄။ ဦးဦးပါလေရာ အမောင့်တူဘီကွန်ဖမ်းဘိုင် မဒမ်ပါလေရာ ၅။ ဦးခင်ခ ၅၀,၀၀၀
ခင်ဇော် says: NBA (နိ ဘိုးအေ)
နိ ဟာ က အလှူခံတာလားး မလှူဖို့ ပြောတာလားး မကွဲပြားးဘူးးး
၅ သောင်းး အထက် လှူသူ က
မယ်ချွိ နဲ့ တစ်ည
မယ်ဝါး နဲ့ တစ်ည
ဖဲ ရိုက် ကြမယ် လို့
ငါ တစ်သိန်းး လှူမယ်..
နိ ၂ ည ငါ နဲ့ အချိန်ဖြုန်းးပါ ..
Wow says: ငင့် ၅ သောင်းအောက်ပဲလှူ ကြရင် နိနဲ့နာပဲ ပတ်လည်ရိုက်နေမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3716
လုံမလေးမွန်မွန် says: deadline date ပေး..
ဘယ်နေ့အလှူခံပိတ်မတုန်း မေးတာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: လှူတော့မယ်ပေါ့ အံစရာကိုတော့ မလှူနဲ့နော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6348
ဂျစ်စူ says: အလှူခံတာ နောက်တိနောက်တောက် မလုပ်ပါနဲ့
ထောင်တန်တဲ့စကား ရယ်ပေါ့ တဲ့
ဒီအုပမာပဲ ပြောတတ်လို့ ဆိတ်မရှိနဲ့
Wow says: ဆိတ်မရှိပါဘူး တကယ်ကို ဆိတ်မွေးမထားတာ
ဒါနဲ့ အလှူခံထည့်သွားဦးလေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်လာပြီးမှတော့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6348
ဂျစ်စူ says: ဟတ်ခဲ့
kai says: ရေကာတာဆောက်ဖို့ကျ.. အလျူမခံဘူးလားဟင်င်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ဒဂျီးမတည်ငွေ အရင်လုပ်လိုက် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .စဉ်းဇားလိုက်အုံးမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: စဉ်းစားပြီးရင် ပြန်လာနော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4021
manawphyulay says: စဉ်းစားရတော့မယ် နတ်ပြီမှာ ဂေါပကတွေများနေရင် လူပြည့်မှာ ဂေါပကတွေ လျော့ကုန်မှာဆိုတော့ ဒီမှာပဲ ဂေါပက လုပ်ရင် ကောင်းမလား…. :P
Wow says: ငင့် စီးပွားပြိုင်တော့တွေ့ဘီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12200
Thint Aye Yeik says: မရှိလို့ မလှူ / မလှူ လို့ မရှိ….ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း မဖြစ်အောင်ဆိုပြီး…
လှူ တော့ လှူ နေပါတယ်…
ဒါမယ့်… ကျနော့် ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေ စာရင်းအရ… ကျပ်တစ်ထောင် အထက်…မလှူ နိုင်သေး…
တန်ဖိုးများများ လှူ ဖို့…ဘဝက အချိန်မတန်သေး..
ဒီတော့..လောလောဆယ် ဘာတွေ လှူ လဲဆိုတော့…
ဘာဝယ်ဝယ်..ငါးဆယ်ကျပ်တန်နဲ့ တစ်ရာကျပ်တန် ၂ မျိုးကို ပြန်မသုံးဖြစ်တော့ပဲ…ကားထဲက ခွက်ကလေးထဲတို့…ကျောပိုးအိတ်ထဲတို့…ထည့်ထားတယ်။ ကားမောင်းရင်း မီးပွိုင့်တွေမှာ…လမ်းတွေမှာ… တောင်းနေသူတွေ (အဖိုးအို အဖွားအိုများကိုသာ)
တစ်ယောက် တစ်ရာ နှစ်ရာ လောက်စီ…နေ့စဉ် လှူ တယ်။
အလှူ ကြီးအတန်းကြီး ပေးနိုင်လောက်တဲ့ ဝင်ငွေ လုပ်အား ရှိလာတာနဲ့… ဒီထက် တိုးတိုးပြီး.. လှူ မယ်ပေါ့။
အခုလောလောဆယ်တော့… သူများလှူ တာတွေ ထိုင်ကြည့်ပြီး…သာဓု…သာဓု…သာဓု…
Wow says: မရှိမလှူနဲ့ပေါ့အေ့ နာ ဂေါပက ဖြစ်ရင် ငတ်ပေါက် စေတနာ သည် ကံတဲ့ စေတနာရှိရင် အလှူပဲပေါ့
ခင်ဇော် says: ခုထိတော့ အလှူရှင်စာရင်း အရ
နာရယ် ဝါးရယ် ဝေရယ် ပဲ ညလုံးပေါက်ရအူးမှာပေါ့နော်။
ဦးဦးပါလေရာ says: တကယ်တော့ အလှူရှင်စာရင်းမှာ ကျုပ်နာမည်ကိုတော့ ထည့်လို့ရပါပြီ
ငွေအမောင့်လေးပဲ ဘတ်ဂျက်မကျသေးလို့ ခဏစောင့်နေတာ.. ..
အခုဝင်ပြောတာကတော့ ဒီအလှူခံပိုစ့်ကို FB မှာတင်ပြီး up ထားပါလားလို့…
အခုက မြင်တဲ့သူ သိပ်မရှိဘူး..
Wow says: မယ်ချွိရေ မိဘီတြောက် အဲလေ အလှူခံရဘီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: အဟွာ။
မဒမ်ပါလေရာ ကွန်ဖန်းရမယ်ဆို နာတို့ကိုကြောက်ပြီး အမောင့် ၅၀၀၀၀ အောက် ဖြစ်နေမှဖြင့်…
kai says: ဒီနှစ်ထဲ.. ဘာသာရေးနွယ်တဲ့အလှူတွေ.. ရှောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်..။
ရွာသူားထဲက.. အလှူရှင်… ၁၀ယောက်ကျော်ရင်တော့ဖြင့်.. ၁သောင်းပါလှူပါ့မယ်..။
ဒါက.. လူမှုရေးအရ.. ဆိုရှယ်အလှူ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ၂၀ ကျော်ရင်ကော ဒဂျီးနော် ကျနော်က ကိုယ့်လူတွေ နောက်ဆုံးမှဆွဲစိရမယ့် စာရင်းရှိပြီးသား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14469
kai says: ၂၀ကျော်ရင်.. ၂သောင်းလှူမှာပေါ့..။
ကဲ.. နိုးနိုးအတွက် .. ဝေါင်းဝေါင်း… ရှာစေသတည်း..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင်ခ says: မမ Wow ရေ
ဒီပိုစ့်ကို ဒီနေ့ ဒါပါနဲ့ဆို ၃ ခေါက်မြောက်ဖတ်မိတာပါ။
ဘာအတွက်အလှုခံတာလဲ ခုထိသိပ်မရှင်းဘူးဗျ (ကျွန်တော်ဘဲ တုံးလို့နေမှာ)
ရွာအလှုဆိုတော့လည်း ငါးသောင်းတော့ လောလောဆယ်စာရင်းတို့ထားဗျာ။
ဘယ်နေ့ ဘယ်ကို ပို့ရမလဲ?
Wow says: သဘာဝဓမ္မရိပ်သာက ယောဂီဆရာမချစ်မြတ်နိုးက မှော်ဘီမှာ ဓမ္မာရုံဆောက်မဲ့အတွက် အလှူခံပေးတာပါ လေးခ
ခင်ခ says: ဟုတ် ဝမ်းသာပါတယ်။
ကျွန်တော် ၅ သောင်းလှုမယ်
ဘယ်နေ့အမှီ ဘယ်လို ပို့ရမလဲ khinkha39@gmail ကိုinform လုပ်ပေးပါ။
ဦးဦးပါလေရာ says: ဟိုဒင်းလေ….
ဘတ်ဂျက် ကျ ပြီ လို့…
ငါးသောင်း + နှစ်လလောက်ဆေးလိပ်လျှော့သောက်ရမယ်… လို့
အဲဒါ လာပြောတာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3552
ဦးဦးပါလေရာ says: မှော်ဘီက အနေအထားလေးတွေ ကိုကြောင်ကြီးက ရှင်းပြ ပြောပြပေးရင် ကောင်းမှာ..
အခုက အဲသည်မှာ သဘာဝဓမ္မရိပ်သာက ဘယ်လို ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာ မသိနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်..
သဘာဝဓမ္မရိပ်သာကို ဘာသာရေး အနေမျိုးထက် ခိုကိုးရာမဲ့လူသားတွေအတွက် ထီးရိပ်တစ်ခုအဖြစ် အင်မတန်လေးစားတန်ဖိုးထားတယ်။
weiwei says: အခုမှကြည့်မိတာ …
အလှူငွေတောင် ထည့်ထားပြီးမှန်း အခုမှသိရတော့တယ် …
ဒါကတော့ မယ်ဝါး မဲပေါက်သွားရှာတာ ..
ကြောင်ကြီးက အမကိုလဲ အဲလိုပဲ ပြောပြီး ဆွဲဆောင်သေးတယ် …
ငွေတစ်သိန်းထည့်ပါ့မယ်လို့ .. အလှူခံတော့ မလုပ်ပါရစေနဲ့လို့ ငြင်းလိုက်လို့ စိတ်ဆိုးသွားလေရဲ့ …
သူလုပ်ပုံကလဲကြည့်အုန်းလေ … ဘယ်နေရာမှာလဲ သွားကြည့်ပြီး မှတ်တမ်းသေချာယူပြီး ပို့စ်တင်ပေးပါ့မယ်ဆိုတာကို လိပ်စာမသိဘူးဆိုတော့ … ဘယ်လိုလုပ်ပြီး စည်းရုံးအလှူခံပေးရမတုန်းလို့ …
kai says: ရိပ်သာက.. ဆရာတော်နဲ့အင်တာဗျူး.. အခုထွက်မယ့်သတင်းစာမှာပါလာပါမယ်…။
ဒီသတင်းစာက.. လွှတ်တော်တခွင်ပြန့်အောင်ဖြန့်မှာမို့.. အစိုးရမင်းများ..အမတ်များလည်း.. သိသွားကြမယ်ပေါ့…။
ဆရာတော့်ကို.. ၂၀၁၄နှစ်ကုန်က.. အလှူအကြောင်းရေးထားတဲ့ သတင်းစာပြတော့.. မှတ်မိပါတယ်တဲ့..။
ဆရာတော့်ညီတော်ကလည်း.. မှတ်မိတယ်..။ ( သူက အယ်လ်အေမှာနေတာ အနှစ်၂၀ရှိပြီ)
သဘာဝတရားရိပ်သာက.. ၂၀၁၄ ..၉လကမှစပြီး..၀င်ငွေ-ထွက်ငွေမျှလို့.. တောက်လျှောက်တိုးတက်လာတာလို့ ဆိုပါတယ်…။
အမေရိကားမှာလည်း..ရိပ်သာတွေ.. ဆက် ဖွင့်မယ့်ပုံရှိပါတယ်..။
ကကြောင်ကြီး.. သိစေ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ကကြောင်ရီး ဘယ်ပြေးပီလဲ